Mpanamboatra sy fananganana rafitra malefaka tsara indrindra | Media
Slimline miaraka amin'ny fanokafana zoro
Famolavolana sy famolavolana firafitra misy patanty
Sady misy an'ireo kinova tanana no misy
Ny hatevin'ny rindrin'ny profil: 2.5mm
Haben'ny habe: 140mm
Ny hatevin'ny vera: 46mm
Max entana: 300kg
Haben'ny Interlock: 32mm
Ny hatevin'ny rindrin'ny profil: 3.0mm
Haben'ny habe: 190mm
Max entana: 600kg
Nanjary niavaka ny habaka rehefa misy ny fiheverana tsara momba ny fanorenan'olombelona. Mino i MEDO fa ny fahitana ny estetika tsy manam-paharoa amin'ny fahatsorana dia mifototra amin'ny antsipiriany mahafinaritra sy ny fahaiza-miasa tena tsara. Ny vokatra dia ny hihaona amin'ny hetahetan'ny olona samy hafa amin'ny fiainana milamina sy ny fikatsahana hatsarana any ivelany.
Slimline Fananganana sy ny Slide Door System
Ny fomba fampiharana ny fibatana Slimline sy ny varavarana mikorisa amin'ilay tranobe dia tena karazan'entana. Ahoana ny fomba hiantohana ny fanoherana ny tsindry mahery, ny fitondrana enta-mavesatra, ny fahateren'ny rano, ny fahateren'ny rivotra ... ireo rehetra ireo no olana tokony halamin'ny mpamolavola MEDO.
Fanamby izaitsizy ny lt hahatonga ny varavarana mihetsiketsika ho lehibe amin'ny habeny, manify miaraka amina tsipika mahafinaritra ary tsara amin'ny fampisehoana!
3.0mm hatevin'ny rindrina, tsipika mombamomba voalanjalanja tsara, fiatoana mafana indroa, adidy mavesatra misy enta-mavesatra mavesatra 50Okg: ireo rehetra ireo dia taratry ny fahaizan'ny miavaka amin'ny famolavolana firafitry ny mombamomba sy ny fikatsahana farany ny vahaolana momba ny fitaovana.
Fialan-tsasatra maharitra indroa, lalan'ny clamping
Fiatoana hafanana indroa
Famolavolana firafitry ny fiovan'ny toetr'andro indroa mba hahatratrarana fampisehoana insulated hafanana avo. Ny rindran-damosina sy ny solosaina miaraka amin'ny gaskets famehezana manokana sy ny tsipika fanamafisam-peo ambany mba hahatratrarana ny fihenan'ny rivotra, ny fahamafisan'ny rano ary ny insulateur thermal. Kodiarana fifandanjana voatokana sy lalan-totozy mba hampiorina tsara ny varavarankely sy ny varavarana.
Famolavolana fantsom-panafody manokana, fomba fijery lehibe
Famolavolana fantsona manokana
Vahaolana fanosehana 3 misy famolavolana faran'ny fantsakana manokana sy famolavolana tanky fanondrahana ivelany mba hanomezana fahafaham-po ny sary samihafa miaraka amin'ny fahamafisan'ny rano tena tsara. Fanamafisana ny famolavolana interlock manify ho an'ny varavarana atsinanana malalaky ny velarana miaraka amin'ny fomba fijery tsy voafetra.
Mitondra enta-mavesatra, 2-Track / Panel, 2-Lock / Panel
Làlana / tontonana roa
Roller ambany asa mavesatra ary lalana 2 isaky ny fehy hahatratra max 600kg ho an'ny tontonana lehibe panoramic. Hidin-trano avo roa heny ho an'ny tontonana ho an'ny fiarovana azo antoka sy porofo famakiana trano.
Fandidiana fiara fitateram-bahoaka. Roller ambany andraikitra mavesatra ho an'ny lehibe tontonana panoramic. Ny rafitra manainga sy mihetsika dia manome tombo-kase tena tsara varavarana ivelany. Fampifanarahana amin'ny hidin-trano mba hahazoana fiarovana bebe kokoa sy tsiambaratelo.
Rafitra fialan-tsasatra indroa sy lalan-drindrina
Famolavolana firafitry ny fiovan'ny toetr'andro indroa mba hahatratrarana insulate termal avo fampisehoana. Rafitra fanandratana sy solosaina misy gasket manokana famehezana ary kofehy famehezana ambany mba hahatratrarana ny fihenan'ny rivotra, tery ny rano sy ny insulation thermal. Kodiarana fandanjana voatokana ary fametahana lalana hanamafisana ny varavarankely sy ny varavarana.
Làlana avo lenta, fijerena panorama
Làlana avo lenta
Famolavolana lalana ambany ambany ho an'ny fametahana rano tena tsara. Slim interlock ho an'ny fomba fijery panoramic.
Mpankafy tokana misokatra sy akaiky, mitondra entana be
Mpankafy tokana on / off
Panel fanokafana tokana mba hihaonana amin'ny filàn'ny scenario manokana. Fanodinam-bokatra mavesatra ambany ho an'ny fanokafana lehibe miaraka amin'ny fijery tsy voafetra.
Rafitra fiakarana sy solosaina ho an'ny famehezana varavarana ivelany tena tsara. Varingarin'i fanamboarana ho an'ny fiarovana bebe kokoa sy fiainana manokana.
Fanamafisana ny fidirana an-tsitrapo nohatsaraina
Rehefa mihidy ny varavarana mihodina sy misosa ary nafindra tao amin'ny toerana mihidy ny tahony, tsy ny mekanisma fanidiana ihany no tafiditra, fa ny lanjan'ilay ventiny feno azy kosa apetraka eo amin'ilay rindrina. Ireo mpiditra an-tsokosoko dia tsy mila mamorona tombony ampy fotsiny hanapotehana ny rafitra fanidiana maro, fa koa hampihetsi-po ny lanjan'ny vent.
Ankoatr'izay, na dia avela hisokatra kely ho an'ny rivotra aza ny vent, dia tsy azo atosika misokatra fotsiny izy raha mbola tsy azo afindra avy any ivelany ny tahony.
Hightness tsara kokoa amin'ny rano | Fanamafisana ny rivotra tsara kokoa | Mitombo ny faharetana
Ny varavarana manainga sy mikorisa dia mampiasa mekanika manandratra ny tontonana alohan'ny hisosorany mba hisorohana ny olana mahazatra amin'ny varavarana mihetsiketsika mahazatra ary manome fampisehoana tsara kokoa amin'ny fahateren'ny rano sy ny fahateren'ny rivotra. Voalohany, mamela ny tombo-kase hisintaka ary hisoroka ny fihenan'ny fikorontanana mandritra ny fandidiana; Faharoa, azo ampiharina ny tombo-kase matevina satria tsy manampy ny ezaka fanokafana ny tontonana.
Ankoatr'izay, nitombo ny androm-piainana satria ny tombo-kase dia tsy tratry ny akanjo sy fahasimbana amin'ny fikorontanana.
Fandidiana mora sy malefaka
MEDO Lift and Slide Systems dia mamela ny mpampiasa hanokatra takelaka mihoatra ny habeny amin'ny tsindry malefaka amin'ny rantsantanana.
Ho fanampin'ilay tontonana nakarina voaro amin'ny fahasimbana ateraky ny vovoka sy ny vato kely amin'ny làlana,
MEDO Lift sy Slide Doors dia mampiasa bearings avo lenta avo lenta hanatsarana ny fandidiana malama.
Noho izany, ny varavarana manandratra sy mikorisa dia tena atolotra ho an'ireo takelaka lehibe mavesatra.
Miaraka amin'ny tahony mora ampiasaina sy ny mekanisma fampitana misy patanty, na ny ankizy sy ny loholona aza dia afaka manala mora foana ny takelaka mavesatra.
Ny fihetsika tsotra mihodina dia tsy mamoha varavarana fotsiny fa manainga ny varavarana miaraka amin'izay koa.
Tsy mila mekanisma fanidiana fanampiny ampiharina amin'ny rantsan-tànana ary tsy ho simba rehefa mandeha ny fotoana.
Teo aloha: Rafitra rindrin'ny ambainy